Batterie BT LifePo4 ho an'ny 19′R
BT andian-bateria rafitra dia 48V / 24V / 12V rafitra ho an'ny fifandraisana back-up karazana LiFePO4 (lithium vy phosphate) bateria vokatra, ny rafitra dia mampiasa ny LiFePO4 nandroso teknolojia bateria amin'ny tombontsoa ny ela tsingerina fiainana, kely habeny, maivana lanja, fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana, ary manana adaptability matanjaka ara-tontolo iainana, hevitra ho an'ny tontolo ivelany henjana.
• Namboarina mitsingevana fiainana fanompoana: mihoatra ny 20 taona @25 ℃
• Fampiasana cyclic: 100% DOD, > 2000 cycles, 80% DOD, > 3000 cycles
BT Series LiFePO4 Battery Rack 19″
Volavolan'ny herinaratra: 12V, 24V, 48V
Fahaizana: hatramin'ny 12V200Ah, 24V100Ah, 48V100Ah.
Namboarina mitsingevana fiainana fanompoana: mihoatra ny 20 taona @25 ℃
Fampiasana cyclic: 100% DOD,> 2000 cycles, 80% DOD,> 3000 cycles
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Batterie, ny fiainana lava indrindra eo amin'ny sehatry ny bateria.
> Endri-javatra ho an'ny CSPOWER Lithium Battery
Noho ny fitakiana paikady fitsitsiana angovo, ny CSPOWER dia manolotra rafi-pamokarana herinaratra feno amin'ny alàlan'ny voltase maromaro (12V / 24V / 48V / 240V / sns.).Kely kokoa izy io ary maivana kokoa ny lanjany, saingy manana androm-piainana lava kokoa izy, matanjaka kokoa ny mari-pana, ary mahomby kokoa ny fitahirizana angovo.Miaraka amin'ny rafi-pitantanana bateria marina sy azo itokisana (BMS), ny rafitry ny herin'ny bateria lithium dia vahaolana tsara kokoa ho an'ny fahombiazana ambony indrindra sy azo itokisana.Taorian'ny fanao an-taonany maro dia manana traikefa be dia be amin'ny famatsiana herinaratra backup ao amin'ny indostria izahay, ary hanohy hanome vokatra bateria tsara indrindra izahay.
> Tombontsoa ho an'ny bateria CSPOWER LiFePO4
► Avo ny hakitroky ny angovo.Ny habe sy ny lanjan'ny bateria lithium dia 1/3 hatramin'ny 1/4 amin'ny bateria asidra firaka nentim-paharazana miaraka amin'ny fahafaha-manao mitovy.
► Ny tahan'ny fiovam-po angovo dia 15% ambony noho ny an'ny bateria asidra firaka nentim-paharazana, ny tombony amin'ny fitsitsiana angovo dia miharihary.Ny tahan'ny famotsorana tena <2% isam-bolana.
► Mahazatra ny maripana malalaka.Ny vokatra dia miasa tsara amin'ny hafanana -20 ° C hatramin'ny 60 ° C, tsy misy rafitra fanamafisam-peo.
► Ny faharetan'ny tsingerina ho an'ny sela tokana dia 2000 cycles, izay avo 3 ka hatramin'ny 4 heny noho ny faharetan'ny bateria asidra firaka mahazatra.
► Ny tahan'ny fivoahana avo kokoa, ny fiampangana haingana kokoa ary ny famoahana Rehefa ilaina ny famatsiana herinaratra backup mandritra ny 10 ora na latsaka, dia mety hampihena hatramin'ny 50% ny fanamafisana ny fahaiza-manao, raha oharina amin'ny bateria asidra.
► Fiarovana ambony.Ny bateria lithium dia azo antoka, ny fitaovana electrochemical dia miorina, tsy misy afo na fipoahana amin'ny toe-javatra faran'izay mafy toy ny mari-pana ambony, circuit fohy, fiatraikany mitete, piercing, sns
► Fampisehoana nomerika LCD tsy voatery.Ny fampisehoana dizitaly LCD azo atao dia afaka mametraka eo amin'ny tontonana anoloana amin'ny bateria ary mampiseho ny tanjaky ny bateria, ny fahafaha-manao, ny fampahalalana amin'izao fotoana izao, sns.
> BMS an'ny LiFePO4 Battery
Mihoatra ny asa fitsirihana ny fivoahana
Mihoatra ny asa fitadiavana ankehitriny
Fohy detection function
Fiarovana ny maripana
Fiara elektrika, fihetsehana elektrika
Rafitra fitahirizana angovo avy amin'ny masoandro/rivotra
UPS, hery backup
Jiro sy ny sisa
teo aloha: CSG Solar Smart Generator
Manaraka: LifePO4 Relpace SLA Battery
(Ahy) refy (mm) lanja Lanja tsy afa-karatsaka
halavan'ny sakany hahavony Mp Mp
12.8V LiFePO4 bateria ho an'ny kabinetra 19′Rank
25.6V LiFePO4 bateria ho an'ny kabinetra 19′Rank
48V LiFePO4 bateria ho an'ny kabinetra 19′Rank
51.2V LiFePO4 bateria ho an'ny kabinetra 19′Rank
51.2V LiFePO4 PowerWall
Sary LPW48V100H 51.2 100 520 460 195 52 54
Sary LPW48V150H 51.2 150 670 540 195 75 77
Sary LPW48V200H 51.2 200 600 600 1000 112 114
OPzS Tondra-drano Asidra Asidra
Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Batterie cellule solaire Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie 12v 7ah azo averina Battery Ups ho an'ny solosaina Batterie tsy misy fikojakojana